ए एन एम एन स्पोर्ट्स ग्रुप बनभोज कार्यक्रम सम्पन्न !
By सपनासंसार July 18, 2009
मिनिसोटा, १८ जुलाई, २००९,
एन एन एम एन स्पोर्ट्स ग्रुप द्रारा आयोजना गरिएको भनभोज तथा भलिबल खेल कार्यक्रम आज निकै उत्साह का साथ सम्पन्न भएको छ । जोन पौडेलको संयोजकत्वमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम मा भर्खरै मात्र नेपाल बाट अमेरिका आउनु भएका नेपाली हरु को पनि उपस्थिती थियो । एन एन एम एन स्पोर्ट्स ग्रुप जन संम्पर्क समिती का अध्यक्ष पुजन पन्त ले जान कारि गराए अनुसार, उक्त कार्यक्रममा ७० जोड नेपाली हरु को उपस्थिती थियो । उक्त कार्यक्रममा,उपस्थित नेपाली दाजु भाई तथा दिदी बहिनि हरुले बार्बिक्यु को साथसाथै भलिबल खेल को आनन्द लिएका थिए!
उक्त कार्यक्रमकै अवसर पारेर एन एन एम एन (एसोसियसन अफ नेप्लिज ईन मिनिसोटा) का कार्यकारी अध्यक्ष भाष्कर तिर्पाथीले सम्पुर्ण मिनिसोट बासि नेपाली हरु एउटै छाता मुनि आउन को लागी आग्रह गर्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रम मा धेरै जसो एन एन एम एन का पधादिकारी हरुको पनि उपस्थिती थियो ।
यहि मौकाको फाईदा छोप्दै ए एन एम एन ले सदस्यता अभियान पनि चलाएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाली भलिबल खेलाडि हरु बिदेशी खेलाडि हरु को टिम संग पनि मैंत्रीपुर्ण भलिवल खेल खेलेका थिए । ऊचाईको फाईदा उठाउदै प्राय जसो खेल उनिहरुले आफ्नो हातमा पारेका थिए ।
जादा जादै आयोजक मित्रहरुलाई धन्यबाद ! यस्तै कार्यक्रम हरु सधैनै आयोजना हुन र समस्त मिनिसोटा बासि नेपाली ले आफ्नो उपस्थिती जनाउन।
उक्त कार्यक्रम का तस्विर हरु हेर्न गुनासो डट कम मा जानु होला !
मेरो कलम सुचना-समाचार
Labels: मेरो कलम सुचना-समाचार
Anonymous 7/20/09, 9:28 AM
Thanks for sharing the news to the world !